Flove Ball Valve sy Trunnion Mounted Ball Valve Pressure Test Procedure-Teknika Lahatsoratra-Zhejiang Huaxia Flow Technology Co., Ltd (Titan valve no marika)
Valve Ball mitsingevana sy Trunnion mitaingina fanodinam-bola
Fotoana: 2020-09-30 Hits: 82
1.Ny fitsapana ny tanjaky ny valin'ny baolina pneumatika dia tokony hosedraina amin'ny fisokafan'ny baolina.
1.1 Titan Floating ball valiny fitsapana henjana: ny valva dia ao anaty fanjakana misokatra misokatra, ny mpanelanelana amin'ny test dia ampidirina amin'ny faran'ny iray, ary ny farany kosa mihidy; ahodina imbetsaka ny baolina, ary sokafana ny faran'izay mihidy rehefa voahazona ny valizy, ary voamarina ny fampisehoana tombo-kase amin'ny famonosana sy ny gasket. Tsy tokony hisy ny famoahana. Ny medium test dia nampidirina avy amin'ny faran'ny hafa ary ny fitsapana etsy ambony dia naverina.
1.2 Titan Trunnion Mounted ball valiny fanamafisana: alohan'ny fitsapana, rotate ny bola tsy misy enta-mavesatra imbetsaka, mihidy ny valva-baoritra, ny mpanelanelana amin'ny test dia ampidirina amin'ny faran'ny iray mankany amin'ny sanda voafaritra; zahao ny zava-bitan'ny famehezana ny fidirana amin'ny metatra fanerena. Ny fahamarinan'ny refin'ny tsindry dia 0.5 ka hatramin'ny 1 ary ny elanelana dia 1.6 heny noho ny tsindry fitsapana. Amin'ny fotoana voatondro, raha tsy misy depressurization, dia mahafeno fepetra; avy eo ny fampandehanana medaly dia ampidirina avy amin'ny faran'ny hafa, ary averina indray ny fitsapana etsy ambony. Avy eo, ao anaty fanjakana misokatra misokatra ny valizy, mikatona ny tendrony, feno ny mpanelanelana ny lavaka anatiny, ary ny fonosana sy ny gasket dia voasedra eo ambany fanerena fitsapana, ary tsy tokony hisy ny fivoahana.
2. Fitsaboana ho an'ny flange Ball Valve
2.1 Fitsapana Shell-static Shell
Misokatra amin'ny ampahany ny valizy, fenoy rano ny vatan-tsofina ary apetaho ny tsindry andrana aseho ao
Tabilao 1. Hamarino tsara fa mihidy ny valizy avy eo hijerena ny fitambaran'ny vatana sy ny vatan'ny vatana mba hiantohana ny famoahana aotra ary tsy misy famoaka ny faritra rehetra.
Ny faharetan'ny fitsapana dia tokony ho araka ny Tabilao2.
Tabilao 1 Shell test an'ny ASME B16.34 [Unit MPa]
Fitaovana fitsapana akorandriaka 150LB 300LB 600LB
Tabilao 2 Ny faharetan'ny fitsapana ny fitsapana ny akorandriaka sy ny fanidiana «unit min
Size (NPS) Fitsapana akorandriaka hydrostatic Fitsapana fanakatonana valizy avo lenta (Hydrostatic) Fitsapana fanakatonana valizy ambany (Gas)
2.2 Fitsapana avo lenta amin'ny valizy (Hydrostatic)
Mikatona tanteraka ny valizy, andramo ireo lalana roa. Toro lalana iray isaky ny misy tsindry amin'ny latabatra
Mikatona tanteraka ny valizy, andramo ireo lalana roa. Toro lalana iray isaky ny misy tsindry amin'ny latabatra 3. Alao antoka fa misy fivoahana aotra amin'ny faritra manontolo.
Ny faharetan'ny andrana dia aseho amin'ny tabilao3
Ho an'ny valizy vy tsy misy fangarony sy vy tsy misy fangarony, ny votoatin'ny klôroida ao anaty rano andrana dia tsy tokony hihoatra ny 30 ppm isam-bolana.
Tabilao 3 Fanerena ny valva (ASME B16.34) [singa MPa]
Fanerena ny habe (NPS) 150LB 300LB 600LB
2.3 Fitsapana seza ambany fanodinana ambany (Gas)
Mikatona tanteraka ny valizy, andramo ireo lalana roa. Toro lalana iray isaky ny mandeha amin'ny tsindry 0.6MPag. Hamarino tsara fa misy fivoahana aotra amin'ny faritra misy tombo-kase iray manontolo.
Ny faharetan'ny fitsapana dia aseho amin'ny tabilao2
2.4 Fepetran'ny fanekena ny fitsapana fanakatonana (ISO5208)
seza Seza malefaka Metal mipetraka
Taham-pivoahana 0 Leakage (A) > = 01mm3 / SxDN (D)
2.5 Aorian'ny fitsapana fanerena
Ny rano fanandramana dia esorina tanteraka amin'ny valizy.
Valve vy vy karbaona, ny atin'ny valizy dia hofafazana na hosorana menaka fisorohana harafesina mba hisorohana ny harafesina sy harafesina mandritra ny fitaterana sy fitehirizana.
Taloha: Fitsipiky ny fisafidianana ireo karazana fananganana valves-ball
Next: Famolavolana Ball Valve Seal Surface 5 samihafa